WhatsApp dia hamela anao hiala amin'ireo vondrona nefa tsy hampandrenesina ny mpampiasa sisa | iPhone News
WhatsApp dia ahafahanao miala amin'ny vondrona nefa tsy mampandre ny mpampiasa hafa
Angel Gonzalez | 17/05/2022 17:00 | Fampiharana iPhone, About us
Andro vitsy lasa izay dia nahafantatra izahay fa nampidirin'i WhatsApp tamin'ny dikan-beta amin'ny fampiharana azy ny fikarohana sivana. Izany dia namela anay hahita mora kokoa izay tadiavinay amin'ny alàlan'ny andiana masontsivana. Ny fiasa vaovao naseho tao amin'ny beta an'ny WhatsApp ho an'ny desktop dia ny ny fahafahana miala amin'ny vondrona WhatsApp tsy mampandre ny mpampiasa rehetra, mpitantana ihany. Miaraka amin'ny fahatongavan'ny Vondrona sy vondron'olona hatramin'ny 256, dia fepetra tsara ny fisorohana ny fampahafantarana ny vondrona iray manontolo ny fiaingan'ny mpampiasa iray.
Afaka miala amin'ny vondrona WhatsApp tsy misy mahatsikaritra izahay
Ny vondrona WhatsApp dia efa nisy hatry ny ela. Raha ny momba antsika ankehitriny koa. Rehefa manapa-kevitra ny handao vondrona ny mpampiasa iray, ny mpampiasa rehetra dia mahita hafatra mampitandrina azy ireo amin'ny fiaingan'izy ireo. Raha ny marina dia maka antsasaky ny habaka amin'ny hafatra mahazatra izy io ary mipetraka eo afovoan'ny efijery. Mety hiova tsy ho ela anefa izany.
Ny ekipan'i WABetaInfo dia nahita fiovana vaovao mifandraika amin'ny fialana amin'ny vondrona. Ity endri-javatra vaovao ity dia niseho tao amin'ny beta an'ny WhatsApp Desktop fa ho avy amin'ny iOS sy Android tsy misy isalasalana raha toa ka manome hazavana maitso amin'ny fanovana ny serivisy fandefasana hafatra.
WhatsApp dia manomboka manandrana sivana amin'ny fikarohana amin'ny beta
Ity fanovana ity manao ny fivoahan'ny vondrona WhatsApp tsy hitan'ny mpampiasa hafa. Miaraka amin'ny exception. Hampandrenesina ny fiaingana rehetra mpitantana vondrona. Mety hifanaraka amin’izany, araka ny efa nambarantsika, amin’ny fahatongavan’ny Fokonolona amin’ny volana ho avy, ireo sehatra maromaro izay ho ivon’ny sain’ny maro. Ary ny marina dia ny fiaingan'ny mpampiasa dia tsy tokony hisarika ny sain'ny vondrona tahaka ny ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao rehefa misy olona miala.
Ho hitantsika raha manapa-kevitra ny hampihatra an'io fanovana io amin'ny fotodrafitrasany manontolo ny WhatsApp. Raha toa ka manao izany, na iOS, Android, ny dikan-tranonkala ary ny kinova desktop dia havaozina hialana amin'ny hafatra manelingelina amin'ny fandaozan'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » WhatsApp dia ahafahanao miala amin'ny vondrona nefa tsy mampandre ny mpampiasa hafa
Apple dia hamela ny mpamorona hampiakatra ny vidin'ny famandrihana amin'ny fetra sasany
Aqara dia manomboka ny fivarotana vokatra ao amin'ny Amazon Spain